September 25, 2016 – Wararka inaga soo gaaraya magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in 7 qof ay xalay ku dhaawacantay, kadib weerar bambaano oo lagu qaaday saldhiga ciidamada dowladda ku leeyihiin magaaladaasi.
Qaraxan oo xalay fiidkii lagu qaaday goobtaasi ayaa inta la xaqiijiyay waxaa ku dhaawacmay todobo ruux oo shacab iyo ciidan isugu jira sida uu xaqiijiyay Taliyaha Booliska Magaalada Baledweyne Cali Dhuux Cabdi Mahad Alle.
Dadka ugu badan ee ku dhaawacmay qaraxaasi ayaa ahaa dad shacab ah, iyadoo ciidamada dowladda ay fureen rasaas xoogan qaraxa kadib, taasi oo wel-wel iyo cabsi ku abuurtay dadkii degnaa xaafadda Buundo weyn ee magaalada Beledweyne.
Inta badan ganacsiga, isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa hakad galay qarax kadib, waxaana ciidamada ammaanka ay howl galo lagu baadigoobayo kooxihii bamka soo tuuray ka sameeyeen deegaankaasi.
Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa isbuucyadii u danbeeyay ka taagan si qab-qabsi dhinaca siyaasadda ah, waxaana dhawaan halkaasi lagu dilay ganacsade caan ka ahaa magaalada.
September 25, 2016 Geesey